သင့်ရဲ့ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနည်းစနစ်အားဖြင့်သင့်ကိုကူညီဖို့ခြေလှမ်းများ | ခွငျကောငျ Nits
Your hairstyle saysalot about your personality, so change it for the better. ဘယ်ဟာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ, ဆွ, ပြား, သို့မဟုတ် moisturize, သင်၏ဆံပင်ကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုရန်မရေမတွက်နိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်. Read on and learn some important hair care tips!
If you areagenerally healthy person, then you can be sure that you can experience healthy-looking hair. If you drinkalot of water and eat plenty of healthy foods, your hair will become healthier asaresult. သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအစာသည်အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှန်ကန်သောပမာဏလိုအပ်သည်, မြေတပြင်လုံးအစေ့များနှင့်အခြားကျန်းမာပစ္စည်းများ. ကောင်းမွန်စွာစားပါ။ သင်၏ဆံပင်ကသင့်အားထုတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်.
ဆံပင်ကိုကျန်းမာစေပြီးပျက်စီးမှုမှကင်းဝေးစေရန်, ဒါကြောင့်စိုစွတ်နေစဉ်ကဖြီးရှောင်ကြဉ်ပါ. It’s much more likely to break if you brush it when it’s wet. ခြောက်သွေ့တဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းဆံပင်ကိုပုတ်ပါ, သင်၏ဆံပင်ကိုမထိခိုက်စေရန်ရှောင်ရှားရန်.
သင့်ဆံပင်ကို ponytail တွင်မကြာခဏပြန်ဝတ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ. Regardless of the hair tie you use, repeated stress will always result in breakages. Even if you have to wear your hair up at work, let it down whenever possible to give itabreak from the constant stress.
If you value your hair, don’t useablow dryer. Styling with heat damages your hair’s structure, making it more frizzy and less manageable. အဲဒီအစား, wrap your wet hair inatowel for as long as possible. This is the best way to retain moisture, avoid frizz and also protect the texture of your hair.
Tags:: avoid damaging, လေမှုတ်စက်, ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအကြောင်းရှုပ်ထွေး ? Use These Tips! »